Sawirro: Saints oo hor istaagtay 10 wiil oo Arsenal ah in ay guul gaaraan :: fc ifiso
Home > Sawirro: Saints oo hor istaagtay 10 wiil oo Arsenal ah in ay guul gaaraan
Sawirro: Saints oo hor istaagtay 10 wiil oo Arsenal ah in ay guul gaaraan
Kooxda Southampton ayaa ka hor istaagtay kooxda Arsenal in ay sii dheereyso dhibcaha ay ku heyso hogaanka horyaalka England Premier League kaddib markii ay barbaro 2-2 ah ay ku kala baxeen.
Ciyaartii ka dhacday garoonka kooxda Saints waxa ay aheyd mid cajiib ah maxaayeelay Wenger waxa uu halkaasi kula soo kulmay wax aan u wanaagsaneyn dhameynta Abaarta Koobabka ee heysata Arsenal.
Gool uu 21daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta uu u dhaliyay kooxda Southampton Jose Miguel Fonte ayaa sababay in qeybtii hore lagu nasto 1-1 ay ku horeyso kooxda martida loo ahaa.
Hase yeeshee markii la isku soo laabtay ayaa wiilasha Gunners ay bilaabeen weerar dheeri ah, waxaana ka dhashay labo gool oo deg deg ah kuwaasi oo ay magacyadooda ku dhigeen Olivier Girou iyo Santiago Cazorla.
Laakiin Arsenal waqtibadan hogaanka ciyaarta siima heyn waxaa durbadiiba ka soo dhigay Adam Lallana oo loo caleemasaari karo laacibkii ciyaarta madaama uu si fiican ugu shaacireynayay kubada kooxda Southampton.
Si kastaba, Mathieu Flamini ayaa Rooso ka qaatay kooxda Arsenal daqiiqadii 80aad taasi oo gaabis galisay weerarkii Arsenal.
Gunners ayaa hada ku hogaamineysa Premier League 52 dhibcood 23 kulan oo ay ciyaartay waxaana ay qatar ugu jirtaa in lagala wareego hogaaminta horyaalka maxaayeelay Manchester City iyo Chelsea ayaa ciyaari doona.